लकडाउनले मर्कामा परेकालाई गाउँमै रोजगारी - Media Campaign Against Covid19
लालप्रसाद शर्मा, सम्झना रसाइली १ असार २०७७, सोमबार १५:५१
पोखरा/तनहुँ — कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ झोवाङका नारायण पौडेल क्षेत्री लामो समयदेखि पर्वतका ग्रामीण सडकमा बस चलाउँदै आएका थिए । कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले जब लकडाउन सुरु गर्‍यो, उनी घर फर्किए । बेकामे भए ।
यति बेला भने उनी गाउँमै काममा व्यस्त छन् । गाउँपालिकाले बनाउन लागेको बाटोमा उनले कामसँगै दैनिक ८५० रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् । ‘यसरी काम पाउँदा ठूलो राहत मिलेको छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनमा बेरोजगार भएर बस्नुपरेन ।’ उनीसँगै काममा व्यस्त लङबहादुर नेपाली पनि पोखरा–घान्द्रुक जिप चलाउँथे । लकडाउनपछि उनी पनि घर फर्किए । यति बेला गाउँपालिकाले दिएको अल्पकालीन रोजगारीमा संलग्न भएर काम गर्न पाउँदा उनी पनि दंग छन् । ‘गाउँमा खाली हात बस्नु नपर्दा खुसी छु,’ उनले भने, ‘५/७ किलो चामलसहितको राहतले कति दिन चल्थ्यो र ? काम भने निरन्तर चलिरहेको छ ।’
लकडाउनलगत्तै अधिकांश स्थानीय तहले दैनिक मजदुरी गर्दै आएकालाई राहत सामग्री वितरण गरे । कतिले खाना पनि वितरण गरे । तर ती प्रभावकारी भएनन् । कतै दुरुपयोग पनि भयो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले भने अहिलेसम्म एक जनालाई पनि राहत दिएन । बरु राहत दिनुपर्ने अवस्थाका ३ सय ६० जनालाई लकडाउन अवधिमा रोजगारी दियो । चैत १४ मै कार्यपालिका बैठक राखेर अल्पकालीन रोजगार दिने निर्णय गरेको थियो । ‘सिँढी, बाटोघाटो, पोखरी, कुवा, खानेपानी, नाली निर्माण, मर्मत तथा सफाइ, खेलमैदान, प्यारापिट निर्माणलगायत चालू वर्ष सञ्चालन हुँदै आएका योजनामै काम दिइएको हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले भने, ‘यसले एकातिर योजनाले निरन्तरता पाए । अर्कोतर्फ स्थानीयलाई पनि ठूलो राहत भयो ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज अधिकारीका अनुसार वडाको माग र आवश्यकताका आधारमा, मेसिन, औजार प्रयोग गर्नु नपर्ने, स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोगबाट सम्पन्न गर्न सकिने योजनाका लागि राहतमा आधारित रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिइएको हो । यसले अधिकांश योजना तोकिएकै मितिमा सकिएको उनले बताए । ‘संघीय र प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा सञ्चालित आयोजनामा विनियोजन भई बाँकी रहेको र छैटौं गाउँसभाबाट विनियोजित चालूतर्फको खर्च हुन नसकेको बजेट पुँजीगत प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘लकडाउन अवधिमा करिब ३ करोडजतिको काम भएको छ । ५ दर्जन आयोजना लगभग सकिएका छन् ।’
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले पनि लकडाउनका कारण बेरोजगार बनेका युवालाई विकास निर्माणका काममा सहभागी गराउने उद्देश्यसाथ आवश्यक सावधानी अपनाउँदै विकास निर्माणका काम अगाडि बढाएको छ । गाउँपालिकाले राहतलाई श्रममा जोडेर ‘श्रममा आधारित राहत तथा रोजगारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले बताए । ‘लकडाउनका कारण बेरोजगार बनेका करिब एक सय जनालाई राहतको सट्टा रोजगारी कार्यक्रममा सहभागी गराई पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि साइकल लेन खन्ने काम अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भने । साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न गाउँपालिकाले साइकल लेन निर्माण थालेको र यसको काममा स्थानीय युवा उत्साहसाथ सहभागी भएको थापाको भनाइ छ । गाउँपालिकाले सधैं राहत वितरण गर्न सम्भव नभएको हुँदा श्रममा आधारित राहत कार्यक्रम अगाडि बढाइएको जनाएको छ ।
लकडाउनले काम रोकिएर त्यत्तिकै बसेका बेला गाउँपालिकाले रोजगारी दिएकोमा खुसी लागेको बन्दीपुर–४ का सन्तोष गुरुङ बताउँछन् । उनले भने, ‘काठमाडौंमा सानोतिनो काम गर्थें । लकडाउनका कारण काम रोकिएर घर आएर बसेको पनि २ महिना भइसक्यो । यस्तो समयमा घरछेउमै रोजगारी पाउँदा खुसी छु ।’ स्थानीयलाई विकास–निर्माणका काममा खटाउँदा उनीहरूलाई आम्दानी हुने र गाउँको विकास पनि हुने उनले बताए ।
गाउँपालिकाले ६ वटै वडामा कार्यक्रमअन्तर्गत १/१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । यस्तै, गाउँपालिकाले मुकुन्देश्वरी–रामकोट साइकल लेन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सूचीकृत २९ मजदुर लाई खटाएको छ । श्रममा आधारित राहत कार्यक्रममा वडा नं. ४ र ५ लाई जोड्ने तीन किलोमिटरको साइकललेन निर्माणमा करिब एक सय युवा खटिएका छन् । उनीहरूलाई दैनिक ७ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइएको छ ।